Shanghai COPAK Industry Co., Ltd. natsangana tamin'ny 2015, miaraka amin'ny biraon'ny varotra any Shanghai sy ny ozinina mifandraika amin'izany ao Zhejiang. COPAK dia mpamatsy matihanina amin'ny vokatra ara-tsakafo sy zava-pisotro mahasoa ny tontolo iainana: kaopy PET, tavoahangy PET, vilia taratasy, sns. Ny biraonay any shangh ...
Ahoana ny fanamboarana fitaovana PET? Fampiasana menaka: ampahany kely amin'ny menaka manerantany no ampiasaina hanamboarana kaopy sy tavoahangy plastika PET. 4% ny menaka manerantany no ampiasaina hanamboarana plastika rehetra Amin'ity fonosana ity, 1.2% ny fonosana plastika fotsiny no ampiasaina hanamboarana kaopy fisotro plastika PET sy ...
Orinasa: Shanghai Copak Industry Company LTD Adiresy: National Exhibition and Convention Center (Shanghai). No.333 Songze Avenue, Xujing Town, Distrikan'i Qingpu, Shanghai Booth No.: vokatra 2.2G30: kaopy PET ho an'ny zava-pisotro, kaopy PET manokana, tavoahangy PET ho an'ny zava-pisotro, Custom PET ...